Salsa maka nonprofits: Fundraise, Advocate, Nkwukọrịta | Martech Zone
Salsa's nchịkọta ego na ịkwado ikpo okwu ikike ụlọ ọrụ na-abụghị ndị ọrụ 2,000 nwere usoro jikọtara ọnụ nke na-enyere onyinye ịntanetị, njikwa ndị na-akwado ya, ihe omume, ịkwado na ntinye ego email enweta ego.
Nzube ahia nke Salsa na-enweghi ego na ntaneti bu ngwanrọ na-enyere oru aka ma obu mgbasa ozi ochichi ka o too, tinye aka ma zulite nkwado nke ntaneti. Akụkụ nke Salsa gụnyere:
Njikwa Nkwado - Niile nkọwa na-enweta gị data n'ime Salsa na ijikwa ya ozugbo ọ bụ n'ebe ahụ.
Blasts Email - mepụta na zipu ozi ịntanetị, setịpụrụ onwe gị ma nyochaa usoro nnyefe ahụ.
Mgbasa Ozi Nkwado - omume nkwado na ahụmịhe ndị na-akwado ya.
Nchịkwa onyinye - wuo peeji nke onyinye dị na ntanetị gụnyere ọnụ ụzọ ndị na-azụ ahịa, inye onyinye ugboro ugboro na itinye aka na ntinye aka.
Ihe - mepụta ma jikwaa mmemme ndị ekesara.
Isi na Syndication - mepụta isi na usoro izu ike.
Akụkọ & Ndekọ ọnụ ọgụgụ - wuo omenala na akụkọ di elu.
Nchịkọta Dashboard - monitory ọrụ gị site na etiti dashboard.
Pịnye Ama - mepụta peeji ntinye aka.
Ikekọrịta & Social Media - mekota na Facebook na karia.
Tags: ntinyekwado njikwaonyinyeegota egommefu egoabughi uruezinụlọ anaghị akwụ ụgwọikpo okwu anaghị akwụ ụgwọonyinye onlinenchịkọta ego n'ịntanetịsalsaụlọ nyocha salsasalsalabs